Shiinaha Mass Production 110g 18x14mesh mesh daaqada warshad albaabka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Yuniu
110g 18x14mesh mesh daaqada waxaa lagu xardhay muraayad hal dahaaran oo PVC ah, ka dib daaweynta kuleylka, meshku waa mid cad oo xasilloon, oo leh awood wanaagsan oo hawo iyo daahfurnaan ah. Muraayadda daaqada muraayadda muraayadda ayaa ka dhigaysa wax ku habboon dhismooyinka warshadaha iyo beeraha si looga fogaado duqsiga, kaneecada iyo cayayaanka yaryar ama ujeedada hawo qaadashada.
Ballaaran (mm) Length Roll (mm) Midab
30, 45, 60, 75, 90, 110, 145, 160 4 * 4, 5 * 5 1000 sidii caadiga ahayd 50, 100, 200 caddaan, cagaar, jaalle, oranji, Buluug
Waxyaabaha shaashadda muraayadda muraayadda muraayadda
1) Caqabada cayayaanka wax ku oolka ah.
2) Si fudud loo hagaajiyo oo loo saaro, hooska qorraxda, daliilka UV.
3) Si fudud oo nadiif ah, Udgoon, caafimaad u fiican.
4) meshku waa isku mid, khadadka dhalaalaya kuma laha duuduubka oo dhan.
5) Taabo jilicsan, kala-bax la'aan kadib laabashada.
6) Dabka u adkaysta, xoog jilicsanaanta, cimriga dheer.
loo adeegsaday dhismayaasha xafiisyada dhamaadka-sare, guryaha la dagan yahay iyo dhismayaal kala duwan, beeraha xoolaha, ama beero, iwm. Waa sheyga ugu fiican ee laga ilaaliyo cayayaanka, kaneecada iyo dukhsiga.
Waqtiga bixinta: 15-20 maalmood kadib helitaanka deebaajiga
Adeegsiga Waxyaabaha shabaqa siligga cayayaanka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa albaabbada iyo daaqadaha dhismayaasha kala duwan ee kaneecada, cayayaanka iyo sidoo kale kala tagga
Baakadaha Baakadaha wax lagu duubo, 2/4/6/8 duub oo ku jira hal sanduuq kartoon ah, ka dibna saxaarad (ikhtiyaari ah)
Shuruudaha kale Waan aqbalnaa GUULAYNTA. OEM waa xooggeenna. (Nooc, midab, xirxirasho, iwm) astaan
Xiga: Maro adag oo isku dhejisan
1200Tex 2400Tex Maro adag toos Roving From C ...